Umntwana wesibini: ngaba kuyimfuneko?
Ngoku iindwendwe ezininzi zithe tye kwinto yokuba kwintsapho akubi ukuba babe nabantwana ababini okanye ngaphezulu. Kodwa abaninzi besaba ukuba nomntwana wesibini, kukho izizathu ezininzi zezi zinto. Enyanisweni, ngaba kukho nayiphi na inzuzo ekuvuseleleni umzali? Ngaba kukho ubuncinane isizathu esinye sokuphinda sibuyele eli liva?
Yintoni ekulindele ngexesha lokukhulelwa kwakho okwesibini?
Njengomthetho, ukukhulelwa kwesibili kulula kuneyokuqala, ukuba akukho zixazululo kunye nokunyuka kwezifo ezingapheliyo. Ukuba okokuqala uqaphela isisu esandisiweyo kuphela ngenyanga yesine, ngoko okwesibini ukukhulelwa kuya kubonakala kwangaphambili. Ukongezelela, uya kuziva ukuba umntwana uhamba phambili. Oku kungenxa yokuba okwesibini unokukwazi ukwahlula ngokucacileyo ukuthungca komntwana kwiigesi okanye ezinye iinkqubo kumathumbu.
Isisu ngexesha lokukhulelwa okwesibini lihlala lifumaneka ngaphantsi. Kodwa kule ndawo kukho i-pluses - i-tummy iya kuphazamisa ngaphantsi, kuya kuba nexinzelelo engaphantsi kwesisu kwaye, ngenxa yoko, iingxaki zokugaya ziza kuhla. Ukuba ekukhulelweni kokuqala unokuba neentlungu zesisu, igesi kunye nokuqhawuka, okwesibini kungenako.
Ukuzalwa okwesibini kudla ngokukhawuleza kunokugqithisa kunokuqala, kwaye le nto iindaba ezilungileyo. Ngoko ke, ukuba ukukhulelwa kwakho kokuqala kunye nokubeletha kungashiyikanga, musa ukukhathazeka, okwesibini yonke into ingahamba lula.
Ubungcono imeko yengqondo yomama ophethe umntwana wesibini. Ngoku sele uyayazi ukuba ulindele ntoni emzimbeni, yiyiphi inkqubo eya kubelwa yona, yintoni oyenzayo kule nto okanye loo nto, kwaye ukwesaba kunye nemiba iya kuba yincinci.
Abazali banqabe ukuzalwa kwabantwana abalandelayo, bachaza ukuba umntwana osele ekhona uya kuba nomona. Ewe, kuya kuba, inkunzi isetyenziselwa ingqalelo kwaye ayiyi kufuna ukushiya isikhundla sakhe.
Kodwa ukukhulelwa kuthatha ixesha elide. Ngeli xesha, uya kukwazi ukulungiselela umntwana wokuqala ukubonakala komntakwabo okanye udade, ukubonakalisa uthando lwakho olungenammiselo, ukuzola uloyiko lwakhe kwaye uxelele malunga nezinto ezilindeleyo ngokubonakala komzalwana okanye udade.
Musa ukuthembisa kakhulu kumntwana. Musa ukuqinisekiswa ukuba uza kuzisa iqabane elivela esibhedlele kwimidlalo - umntwana akayi nkampani enhle kumntwana okhulile. Kodwa xelela owakho owokuqala ukuba unokufundisa njani umzalwana okanye udade, ambonise amathoyizi, afundise ukubamba iqhosha, ukuhlala, ukukhwela, ukuhamba. Ekugqibeleni, ixesha liya kufika kumazwi okuqala umntwana angaphinda afundise.
Ukuba ulawula ukungaqhubi umona, ukwahlula ingqalelo ngokulinganayo, ngoko akunakwenzeka ukuba umntwana wokuqala akayi kuvuyela ukongezwa kwintsapho. Ukongezelela, bobabini bethu bahlala bethabile!
Ngokwemvelo, umntwana wesibili uncinci kakhulu kuneyokuqala. Nangona abazali abaninzi bacinga ukuba ukuchitha imali kuya kwanda, enyanisweni, ukwanda kwawo kudla ngokungabalulekanga.
Okokuqala, ezinye izinto ezibekezeleleke ngokupheleleyo kunye namathoyizi mhlawumbi ushiywe kumntwana wokuqala okanye ngabahlobo kunye nezihlobo zakho. Okwesibini, sele usuyazi ngokuqinisekileyo ukuba umntwana akadingi iiflethi ezili-10 kunye nama-blouses angama-40, kodwa i-diapers elula kakhulu kunye ne-yazhonki kunye ne-slide. Okwesithathu, kwindlu yakho sele sele inani elaneleyo leemidlalo ezifanele umntwana. Ukongezelela, ezininzi izinto uya kunika. Ukuncelisa kuyakunceda kakhulu ubomi bakho.
Oomama abaninzi bayesaba umthwalo owongezelelweyo oza kuwa mahlombe abo ngokubonakala komntwana wesibini. Enyanisweni, akuyona into enjengoko kubonakala ngathi. Okokuqala, usuvele unomntwana ozimeleyo ngokwaneleyo onokuzibhokoxa ngandlela-thile kwaye unokukunceda. Okwesibini, uya kuziva ukhululekile, sele uyazi ukuba uza kwenza ntoni nabantwana, xa bekhala, indlela yokuzola, kunokuhlala kunye nendlela yokunyanga. Okwesithathu, imisebenzi eminingi yasendlini, ngokucokisekileyo yokuhlamba imihla ngemihla, iyakwazi ukuphathiswa kalula kwiimpahla zakwa-smart home. Ukudibanisa okuhlukeneyo, abaxhamli, ii-microwave, abacoca i-vacuum banokubanceda kakhulu ubomi babo nawuphi na umama.
Kubonakala ukuba, ukubonakala komntwana wesibini akuyikrele kakhulu njengoko kubonakala kukuqala. Ngexesha elide, uya kukhula, kwaye abantwana bakho baya kukwazi ukudlala kunye, bahlale bebodwa, kwaye uya kuba nexesha elingaphezulu kunye nokuphindwe kabili uthando. Indlela yokwazi, mhlawumbi emva kwexesha, uya kucinga malunga nesithathu.
Ungatshintsha njani umyeni wakhe?
Iingcebiso ezi-7 zabafazi abayeni babo abaguquka
Umshukela waseTurkey ngeebhola ze-oat
Iipencake ezinamaqabunga ngamaphammi ase-carameli
I-pollen yeentyantyambo: ukusetyenziswa kweyeza
Izitya zobisi: i-jelly, iphariji, isobho
Iresiphi yesidlo sasekuseni esingavamile: i-punkcakes esiphunga ngegesi, i-bacon kunye ne-avocado
Schnitzel ukusuka kwiklabishi
Iinkqubo zokunyamekela izinwele
Indlela yokukhetha iiglasi
I-pizza edibeneyo isidlo sakusasa
Iintlobo zabantu. Izibonelelo kunye nokungahambi